トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Fotoana hihaona olona * vady, sy ny fotoana ary sonia ny
Rehefa mihaona olona * tsirairay vady nahasarika ny fanahy, dia rehefa nahatsapa ny halavan'ny onjam-samy izy. Izany fotoana no maha samy hafa ny olona sasany, ny olona sasany tojo be aloha, isika dia olona mivory ao amin'ny minitra vitsy ho lasa olon-dehibe.
Ankoatra izany, raha misy na dia ny olona no mahafantatra ny zavatra manindry mandry fanahy na vady, satria indraindray tsy, raha ny marina, dia tsy latsa-danja ny tranga izay tsy nahatsikaritra nitsena azy.
Izay nanao hoe: Misy zavatra toy izany ho toy ny fotoana mety ho fihaonana eo amin'ny vadiny ny fanahy, izany no ilazana fa maro ny fiovana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny olona nifanena tamiko tamin'izany andro izany koa ny olona izay efa lasa ny fahafahana manova ny fomba fiaina, ianao mety ho vadinao ny fanahy.
rehefa tojo ny fanahy
vady mba hiezaka hisambotra famantarana ny hihaona fanahy vady voalaza ihany koa fa misy famantarana manan-danja. Inona no hataonao avy ny famantarana. Araka ny voalaza ao amin'ny toko teo aloha, rehefa miarahaba
? nitodika hevitra, dia tena azo inoana famantarana fa hihaona olona * vadinao rehefa miarahaba ny fiovana lehibe teo amin'ny fiainako. Ohatra, sampanan-asa sy ny fisotroan-dronono ny fotoana, tia, toy ny rehefa miara-miaina amin'ny tsy mahalala ny tany, raha ny tontolo iainana no niova ho amin'ny ankehitriny Matetika dia ny fotoana.
fotoana mihitsy aza ny mahafantatra ny fifandraisana teo amin'ny olombelona sy ny
izao dia tsy ny efa nihaona ny fanahy vady, dia misy ihany koa ny mety hisian'ny olona nifanena tamiko mifandray amin'ny olona manodidina dia fanahy vady. Fifandraisana tamin'ny olona izy, dia natao na vokatra eo amin'ny fihaonana, toy ny tsy manantena ny tenako. Fantatr'i fifandraisana toy izany, raha mba hankamamy, dia mety tsy maintsy tafintohina manerana olona * rehetra vady ho an'ny fahafahana.
? tsara eo amin'ny fihetseham-po ny
asa sy ny fiainana rehefa Efa ahitana rano miboiboika, tokoa fanamby amin'ny zavatra tena Na dia ny fihetseham-po dia ahitana rano miboiboika fa ny boky ny fahafahana hihaona ny fanahy vady. Rehefa
fanahiko dia feno hery, dia mety hisarika ny fanahy vady hahatsapa ny halavan'ny onjam. Fihetseham-po sy hiasa mafy ho an'ny zavatra rehetra, raha efa niseho fihetseham-po fa te-hanova ny hatreto, dia aoka ny fahatsiarovan-misedra amin'ny olona.
fotoana hihaona zava-dehibe
fanahiko vadiny, mba tsy hanapaka ny fotoana Matetika no somary mora-to-hahatakatra niavaka araka ny voalaza etsy ambony. Izany hoe: raha tsy misy fahatsiarovan fa izy dia voasariky ny fanahy vady, izany ihany koa izay mety tsy hisy hahamarika.
Noho izany, fihenjanana foana ny Antenna fanahy mitady vady, dia aoka ny manana fahatsiarovan-tena mora mahatsapa ny hahazo ny fahatsapana ny, raha ny mpanohitra efa niseho teo anoloan'ny maso. Ary mihoatra noho ny zavatra, dia zava-dehibe ny mandany isan 'andro izy ireo manana hery tsara.